လက်တကမ်းမှာ.. | မိုးချိုသင်း မှတ်တမ်း
အခုတလော ဟိုတွေး ဒီတွေးနဲ့ စာမရေးဘဲ ရာသီဥတု အေးအေးမှာ စောင်ခြုံထဲ ထွေးပြီး တွေးနေချင်မိတယ်။
ဘ၀မှာ တခါတလေ ကိုယ့်ရဲ့ လိုအပ်ဆန္ဒတွေနောက်လိုက်ရင်း စိတ်ဖိစီးမှုတွေနဲ့ မောပန်းရတာတွေ ရှိတယ်။ အဲဒီအခါ ကိုယ့်အနားမှာ ရှိနေတဲ့ ကိုယ်အလိုလိုရနေတဲ့ အရာတွေကို ဘယ်နှစ်ခါ လျစ်လျူရှုမိသလဲ၊ ဘယ်နှစ်ခါ တန်ဖိုး မထားဘဲ ပစ်ထားမိသလဲ လို့ တွေးရင် အဲဒီလိုအင်ဆန္ဒတွေ မောပန်းမှုတွေဟာ မှုန်ဝါး ပျောက်ကွယ်သွားပြီး စိတ်သက်သာရာ ရသွားတတ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ခုလို စာမရေးဖြစ်တဲ့ အချိန်တွေမှာ အဖေ့ကဗျာလေးတပုဒ်နဲ့ ဧည့်ခံပါရစေအုံး။ ကိုယ်မေ့နေတဲ့ ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေ ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေ ကိုယ့်ဆီမှာ၊ ကိုယ့်နားမှာ ရှိနေတတ်တာကိုလဲ သတိတရ နဲ့ ကျေနပ်ကြည်နူး သတိထားမိစေချင်လို့ပါ။ ဖတ်ကြည့်ပါအုံးနော်။
၁၁၊ ၁၊ ၁၉၉၁
ကိုယ်မြင်တဲ့ထောင့်က ကြိုက်သလို ခံစားနိုင်ပါတယ်။ ဖတ်တဲ့သူ စိတ်သဘောအတိုင်းပါပဲ။
December 9, 2008 at 8:44 AM
ကိုယ်စိတ်ကူးနဲ့ကိုယ် တွေးပြီး ....
လက်တကမ်းမှာ ရှိနေတဲ့ အရာတွေကို လွန်ပြီး မျှော်မောနေမှုကြောင့် လက်ရှိအချိန်လေးကို “နေ”ဖို့ မေ့နေတာကို သတိပေးလိုက်သလိုပါပဲ။ ကျေးဇူး..ချိုသင်း။
အမရေ … အမ ဖေဖေ ကဗျာလေးက တိုတိုလေးနဲ့ ထိမိလှတယ်။ ခေါင်းစဉ်ဟာ ကဗျာရဲ့ အသက် ဆိုသလိုပဲ အချည်းနှီးဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်လေးက ကဗျာရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို ပိုပြီး ပြည့်စုံ ပေါ်လွင် စေတယ်နော်။
ဒီကဗျာလေးကို ဖတ်ရင်း တခြားရှုထောင့် တခုနဲ့ တွေးမိပြီး ခုလို ရေးလိုက်မိပါတယ်။
ဝေဖြာနေသော ပန်းပွင့်တွေ … ။
အလှပျက်မှာ စိုးထိတ်နေ … ။
အဲဒီမှာ တော်တော် အေးနေပြီလား။ ဒီမှာတော့ ဒီရက်ပိုင်း ရေခဲမှတ် ရောက်နေလို့ အတော် သတိထားနေရတယ်။
ဆရာကြီးရဲ့ ကဗျာလေးက တိုပေမယ့် အရှည်တွေးစရာတွေနဲ့ရယ်။
ဒီနိုင်ငံမှာတော့ ပန်းဆို မခူးကြဘူး။ အပင်ပေါ်မှာပဲ သူ့သဘာဝအတိုင်း နေစေ၊ ကြွေစေတာနော်။ တစ်ကျောင်း တစ်ဂါထာပေါ့လေ။
အလိုလို ရနေတတ်ရင် တန်ဖိုးထားဖို့မေ့လျော့တတ်ကြတာ ဘာလို့ပါလိမ့်ဗျာ
December 9, 2008 at 3:34 PM
ဆရာကြီးတင်မိုးရဲ့ ကဗျာတွေက ရိုးရှင်းပြီး နားလည်လွယ်တယ်။ အဲဒါမျိုးရေးဖို့က ခက်တာပဲနော်...
ဘယ်နှစ်ခါ လျစ်လျူရှုမိသလဲဆိုတော့ အခါခါပဲပေါ့ အမရယ်...
December 9, 2008 at 5:14 PM
ကိုယ်အလိုလိုရနေတဲ့ အရာတွေကို ဘယ်နှစ်ခါ လျစ်လျူရှုမိသလဲ၊ ဘယ်နှစ်ခါ တန်ဖိုး မထားဘဲ ပစ်ထားမိသလဲ တဲ့လား
အကြိမ်ပေါင်းများစွာ တန်ဖိုးမထားဘဲ လစ်လျူရှုခဲ့မိတယ်။ ပြန်မရနိုင်တော့ အချိန်ကျမှ တသသလွမ်းပြီး တမ်းတနေရတယ် အမရေ
အမချိုသင်း အခုလည်း စောင်ခြုံမှာကွေးနေတာမို့လား။
ကဗျာလေးအတွက် ကျေးဇူးပါ မမ။
ဆရာကြီး ကဗျာက ရိုးရှင်းပြီး အဓိပ္ပာယ်ရှိသလို အမရဲ့ ပို့စ်မှာ ရေးထားတဲ့ စာပိုဒ်ကိုလည်း သဘောကျတယ်.. :)
December 9, 2008 at 7:21 PM
ရတယ် ...း)
December 9, 2008 at 10:41 PM
ထိမိပြီး..ရှင်းလင်းတဲ့ ကဗျာလေးပါ။ Count your blessing လို့ပြောတတ်ကြတာကိုလည်း...သတိရမိပါတယ်။ နီတိလေး တခု ပါပဲ။
ဘ၀မှာ မချူခဲ့မိလို့ ကြွေသွားခဲ့တဲ့ လက်တကမ်းက ပန်းတွေ ပြန်တွေးမိသွားတယ်..
အလွန်အဓိပ္ပါယ်ပြည့်ဝပြီး နမိတ်ပုံတွေနဲ့ အားကောင်းနေသော ကဗျာတိုကလေးပဲ..
ကိုယ်မေ့နေတဲ့ ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေ ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေ ကိုယ့်ဆီမှာ၊ ကိုယ့်အနားမှာ ရှိနေတတ်တာကို
သတိရဖို့သတိပေးတဲ့ ပိုစ့်လေးအတွက် ကျေးဇူးပါ ချိုသင်းရေ...။
**** ရာသီဥတု အေးအေးလေးမှာ စာတစ်အုပ်နဲ့စောင်ခြုံထဲ ကွေးနေရတဲ့ အရသာကို ဘာနဲ့မှမလဲနိုင်ဘူးနော်...။ ဟီဟိ..
(ဟုတ်ကဲ့ ဟိုတွေး ဒီတွေးနဲ့ စာမရေးဘဲ ကွေးပါ )
ကဗျာလေးကို လေးစား နှစ်သက်ပါတယ်၊၊ အများကြီးပြောပြနေသလိုပါ ၊၊ ကျေးဇူးပါ ၊၊
December 10, 2008 at 5:45 PM
Ko Kyaw said...
ဒီမှာလဲ တော်တော်အေးနေပြီ။ စောင်နှစ်ထပ်နဲ့ ကွေးနေရတယ်။ မှတ်မှတ်ရရ မိုးချိုရဲ့ ဖေဖေကို လွန်ခဲ့တဲ့ mmk ၃နှစ်မြောက် မိတ်ဆုံပွဲတုန်းက စတွေ့ဖူးတာ၊ အဲဒီမှာ သူပြုံးပြုံးလေးနဲ့ စကားတွေပြောနေတာကို ကြည့်ရင်း သူ့ကို အရမ်းလေးစားသွားတယ်။ မိုးချိုမှာလည်း အဖေနဲ့တူတဲ့ အပြုံးရှိတာကိုလည်း သတိထားမိတယ်။
December 11, 2008 at 12:26 AM
လက်တကမ်းမှာ ရှိနေသောအရာများကို သေချာ ပြန်ကြည့်လိုက်မိပါသည်။ ပြီးတော့ ကျေနပ်စွာ ပြုံးလိုက်သည်...
ခုတလော စိတ်ရောလူပါပင်ပန်းပြီး depressedဖြစ်ချင်သလိုလိုတောင် ဖြစ်နေတာ… ဘဘကဗျာလေး ဖတ်လိုက်ရလို့လန်းဆန်းသွားတယ် ချိုသင်းရေ… ခုလို ဝေမျှပေးတာ ကျေးဇူးပါ… ဘ၀ကို အကောင်းမြင်တဲ့ဘက်က ကြည့်ဖို့လက်တို့ သတိပေးလိုက်သလိုပါပဲ….
အခွင့်အလမ်းကောင်း ကြုံကြိုက်ခိုက် ရစေချင်တဲ့ စေတနာထားသူ ဆရာတို့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေအတွက် သိပ်ပြီးဝမ်းနည်းစရာကောင်းတယ်။ အမျိုးယုတ်တွေကတော့ ပန်းတွေမြန်မြန်ကြွေအောင် ချွေချနေလေရဲ့။ ဆရာရေ တမလွန်က စုတ်သတ်နေလေမလား?
မော်တော်ကား နဲ့ ကိုယ်